Sweden: 5 maalmood kadib ayaa Talaalka Corona la bilaabi doonaa. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Sweden: 5 maalmood kadib ayaa Talaalka Corona la bilaabi doonaa.
Wasiiradda arrimaha bulshada Sweden: Lena Hallengren. Foto: Ninni Andersson/G.O.S
Sida ay maanta sheegtay wasiiradda arrimaha bulshada dalka Sweden, Lena Hallengren waxaa 27-ka bishan Desember oo ku aadan maalinta axadda ah ee dhamaadka todobaadkan, dalka Sweden laga bilaabi doonto talaalka Coronavirus.
Waxaa lagu wadaa in maalintaas ay dadkii ugu horeeyay laga talaalo xanuunka Corona, uuna si toos ah dalkaas uga bilowdo ololaha talaalka Corona.
Dowlada Sweden ayaa sheegtay in isbuuc walba ay dalka Sweden soo gaari doonaan 80 kun oo daawada talaalka ah, uuna qorshaha dowladu yahay in dhamaan dadka qaangaarka ah ee Sweden kunool xanuunka laga talaalo, kahor fasaxa xagaaga ee sanadka 2021.
Previous articleBooliska Bergen oo nin toogasho ku dilay.
Next articleShirkad Qareen: Kiiska Mustafa ayaan UNE maxkamad ku saareynaa.